घायलले ‘अन्तरङ्ग’ निर्देशन गर्ने, गीतकारबाट अब निर्देशक बन्ने ! « Mazzako Online
घायलले ‘अन्तरङ्ग’ निर्देशन गर्ने, गीतकारबाट अब निर्देशक बन्ने !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, मंसिर २८–
पाँच सय बढी गीतको शब्द र झन्डै तीन दर्जन फिल्मको स्क्रिप्ट लेखेका शंकर अधिकारी ‘घायल’ ले फिल्म निर्देशन गर्ने भएका छन् । घायलले निर्देशन गर्ने फिल्मको नाम ‘अन्तरङ्ग’ तय गरिएको छ । उनको शब्द रहेको ‘अन्दाज’ फिल्मको ‘सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला’ बोलको गीत सर्बाधिक चर्चित छ ।
‘सिम्पल सिम्पल’ का लेखक घायलले आफ्नो परिचय फराकिलो बनाउन फिल्म निर्देशनमा आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा क्षेत्रमा सफलता हात पारेपछि अर्कोमा जानु पर्छ । फिल्म निर्देशन गर्न हिम्मत जुटाएर आएको छु ।’ घायलको फिल्म ‘अन्तरङ्ग’ प्रेम कथामा आधारित हुनेछ । आउँदो माघ महिनाको दोश्रो साताबाट छायाँकन प्रारम्भ हुने फिल्मको मुख्य कलाकारहरु भने फाइनल हुँन बाँकी छन् ।
सृष्टि थापाको लगानीमा राजेन्द्र श्रेष्ठको प्रस्तुती रहने फिल्म ‘अन्तरङ्ग’ मा सञ्चारकर्मी विकास लामिछाने, कौशल खड्का र दिव्या खड्का लगायत कलाकार पक्का भैसकेका छन् । फिल्ममा संगीत प्रस्तुतकर्ता श्रेष्ठ स्वयम्को छ । काठमाण्डू, भक्तपुर र दुबईमा छायाँकन हुने फिल्मलाई दिव्य सुवेदीले खिच्नेछन् ।